နယ်ခြားစောင့်များပြသာနာဖန်တီးရန်ကြံစည်မှု။ | The Stateless Rohingya
24/05/2017 in Article: Rohingya Authors: The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas	24/05/2017 in NEWS: Rohingya Authors: Rohingya Refugees ‘beaten and thrown out of vehicle’ by staffs of Bangladesh Red Crescent Society	23/05/2017 in Rohingya News at Globe: Myanmar army clears itself of Rohingya atrocity claims	23/05/2017 in Burma News: Cannes Film Festival hosts portrait of Ashin Wirathu, the firebrand Buddhist monk who preaches hard line against Rohingya	22/05/2017 in NEWS: Rohingya Authors: Three Rohingya villagers were brutally beaten by Border Guard Police	22/05/2017 in Rohingya News at Globe: The last thing Rohingya Muslims want	Home » Burmese Language » နယ်ခြားစောင့်များပြသာနာဖန်တီးရန်ကြံစည်မှု။
Posted on 20/04/2017 Photographic effects on prime image 2012
ဘူးသီးတောငျ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်။
ဒိုးတန်းကျေးရွာသို့ငါးခူးရ၊နယ်ခြားစောင့်နယ်မြေရုံးမှနယ်ခြားစောင့်များကလွန်ခဲ့သော ၁၉. ၄ . ၂၀၁၇ရက်နေ့၊ည(၁၁း၁၀)မိနှစ်ချိန်တွင်ဆိုင်ကယ် ၁၂ စီးဖြင့်ရောက်လာပြီး၊ဒိုးတန်းကျေးရွာအုပ်စု(Dial Para)၌ခဏလောက်ရပ်လိုက်ပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်မှဆင်းလာကာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားပြီးသေနတ်(၆)ကြိမ်လောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
တဖန်ဒိုးတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊အရှေ့ဘက်ရှိရွာသို့ပြေးလွှားကာအလားတူသေနတ် ၄ ကြိမ်ခန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်
ထို့နောက်ငါးခူးရအဝင်မှခဏလောက်စောင့်ဆိုင်းပြီးသေနတ် ၅၊၆ ကြိမ်လောက်ပစ်လိုက်ခဲ့ပါသည်။
More from my siteဘူးသီးတောင်၊ ခမရ (၅၅၂) တပ်ရင်းအတွက် ဟုဆိုကာ ရွာသားများကို အမျိုးမျိုး ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေညှစ်လျက်ရှိရိုဟင်ဂျာမလေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျယ်ချုပ်ရပ်ကွက်မောင်တောမြို့ မြောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ စစ်တပ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ရွာသားများကို အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မောင်တောမြို့မြောက်ပိုင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာရွာ နှစ်ရွာကို မြန်မာ စစ်တပ်မှ စီးနင်းRohingya woman sentenced for demanding justice in northern Maungdaw
BGPBurmaBurmese LanguageMyanmarNewsRohingyaမောငျးတောရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရိုဟငျဂြာမြားသညျ ← Previous article